Wafdi rasmi ah oo ka socda Imaaraatka ayaa booqasho afar saacadood qaadatay ku tagay Tel Aviv… – Hagaag.com
Wafdi rasmi ah oo ka socda Imaaraatka ayaa booqasho afar saacadood qaadatay ku tagay Tel Aviv…
Wafdi rasmi ah oo ka socda Imaaraatka ayaa maanta oo Talaado ah booqday Tel Aviv, booqasho afar saacadood qaadatay, tii ugu horeysay ka dib markii la saxiixay heshiiskii caadiyeynta ahaa ee Imaaraatka iyo Israel ee Aqalka Cad bishii September ee la soo dhaafay.
Wafdigan oo ay hogaaminayeen wasiirada dhaqaalaha iyo maaliyada ee Imaaraatka ayaa waxaa la socday wafdi Mareykan ah oo ay ka mid ahaayeen wasiirka maaliyada Stephen Mnuchin, iyo wakiilka Aqalka Cad ee Bariga Dhexe Avi Berkovitch.
Ilo wareed ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa’iil ayaa sheegay in booqashada inta ay socoto la saxiixi doono 14 heshiis, oo ay ugu muhiimsan tahay heshiiska lagu tirtirayo fiisooyinka dal ku galka ah ee shaqsiyaadka. Imaaraadku ayaa noqon doona dalkii ugu horreeyay ee Carbeed ee tallaabadan qaadaa.
Dhinaca kale Wasaaradda Gaadiidka ee Israa’iil ayaa dhinaceeda sheegtay inay maanta saxiixi doonto heshiis u oggolaanaya 28 duulimaad oo ganacsi usbuuciiba inta u dhexeysa Tel Aviv Ben Gurion Airport iyo Dubai iyo Abu Dhabi.
Waxaa la filayaa in wafdiga Imaaraatka ay sii joogi doonaan garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion inta booqashada ay socoto, maadaama aan loo qorsheyn booqashooyin ka baxsan garoonka. Sababtoo ah tallaabooyin taxaddar leh oo ay adeegsadeen mas’uuliyiinta Israa’iil si looga hortago cudurka Corona.
Toddobaadkii hore, Ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu wuxuu ku dhawaaqay in uu qadka taleefanka kula heshiiyey amiirka dhaxalka leh ee Abu Dhabi Amiir Mohammed bin Zayed si ay isu dhaafsadaan booqashooyin.